किन घट्यो पिसिआर परीक्षण? – Health Post Nepal
किन घट्यो पिसिआर परीक्षण?
२०७८ जेठ १६ गते १९:०४
केही दिनदेखि घटिरहेको परीक्षणसँगै कोरोना संक्रमितको संख्यामा पनि केही कमी देखिएको छ।
दैनिक करिब २० हजारको पिसिआर परीक्षण हुँदै आएकोमा पछिल्लो २४ घण्टामा १० हजार ९८६ जनाको मात्रै परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
आइतबार दिउँसोसम्म १० हजार ९८६ जनाको परीक्षण गर्दा ३ हजार ७०२ जनामा संक्रमण देखिएको छ।
यस्तै, एन्टीजेन विधिबाट १ हजार ७८४ जनाको परीक्षण गर्दा ६६७ जनामा संक्रमण देखिएको छ।
दुवै परीक्षण मार्फत ४ हजार ३ सय ६९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
केही दिनअघिको तथ्यांकलाई हेर्दा कोरोना पिसिआर परीक्षणको संख्या घट्दो क्रममा छ।
तर, संक्रमण हुने दर भने यथावत नै छ। अर्थात कूल परीक्षणको ३० देखि ३५ प्रतिशतमा अझै संक्रमण पुष्टि भइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
किन घट्यो परीक्षण?
देशभर सरकारी र निजी गरी ९० वटा ल्याब कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ।
यसका साथै भारत र नेपालको सिमा नाका तथा स्थानीय स्तरमा एन्टिजेनमा मार्फत परीक्षण भइरहेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलको अनुसार नुमना संकलन नै कम भएकाले परीक्षण कमी आएको बताउँछन्।
उनका अनुसार अझै पनि परीक्षणलाई समुदाय स्तरमा लैजान सकिएको छैन।
अस्पतालमा आएर परीक्षणको गरिएको नुमनाको मात्र परीक्षण भइरहेको छ।
‘हामीले समुदाय स्तरमा अझै परीक्षण गर्न सकिरहेका छैनौं। गाह्रो–सारो भएर अस्पताल आइपुगेका मानिसको मात्रै परीक्षण भइरहेको छ,’ डा. पौडेलले हेल्थपोस्टसँगको कुराकानीमा भने, ‘स्थानीय तहमा भएको एन्टिजेन परीक्षणको रिर्पोट कम प्राप्त भएको छ।’
मन्त्रालयले ११ लाखको हाराहारीमा एन्टिजेन किट सम्पूर्ण स्थानीय तहमा पठाएको छ। तर, कहाँ–कति परीक्षण भइरहेको छ। त्यसको नतिजा अझै राम्रोसँग मन्त्रालयलाई आइसकेको छैन।
‘पालिका स्तरमा हामीले ११ लाख एन्जिेटन किट पठाएका छौं। संक्रमितको तथ्यांक दर्ता गर्ने एप्प (आएमयू ) राख्न भनेका छौं,’ डा. पौडलले भने, ‘तर, परीक्षण भएपनि आएमयूमा इन्ट्री कम भएको छ।’ जसका कारण थप समस्या भएको उनको भनाई छ।
संक्रमण दर घटेको छैन
विगत पाँच दिन यताको तथ्यांकलाई हेर्दा संक्रमणदर एकै स्तरमा देखिन्छ।
अर्थात, ३० देखि ३५ प्रतिशतको बिचमा संक्रमणदर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। जेठमा १२ मा पिसिआर तथा एन्टिजेन मार्फत २० हजार ४ सय ४५ नमुना परीक्षण भएको मध्ये ६ हजार ७ सय ४१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो।
अर्थात, कुल संक्रमित मध्ये ३२ दशमलव ९४ प्रतिशतमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यस्तै, जेठ १३ को मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार २० हजार ९९२ नमुना परीक्षण भएकोमा ६ हजार ९ सय ४९ जनामा संक्रमण देखियो।
कुल परीक्षणमध्ये ३३ दशमलव ७० मा संक्रमण पुष्टि भयो। जेठ १४मा २० हजार १ सय १० जनाको नमुना परीक्षण भएको थियो। जसमध्ये ६ हजार ९ सय ५१ जनामा कोरोना पुष्टि भयो। अर्थात, संक्रमणदर ३४ दशमलव ५६।
त्यसैगरी, जेठ १५ मा १ हजार ४ सय ७ सय ७२ जनाको नुमना परीक्षण भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। जसमध्ये ४ हजार ४ सय ८७। अर्थात, ३० प्रतिशतमा संक्रमण पुष्टि भयो।
जेठ १६ (आइतबार) १२ हजार ७ सय ७० नुमना परीक्षण भएकोमा ४ हजार ३ सय ६९ जनामा संक्रमण पुष्टि भयो। अर्थात, ३४ दशमलव २१ प्रतिशतमा संक्रमण पुष्टि भएको देखिन्छ।
विगतको पाँचको दिनको तथ्यांकले अझै संक्रमण घटेको देखिँदैन। बरू परीक्षणको संख्या २२ हजारबाट घटेर १२ हजारमा पुगेको छ।
यसको अर्थ अझै पनि नेपालमा संक्रमणको जोखिम थर्थावत नै रहेको प्रष्ट हुन्छ।
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. बाबुराम मरासिनी अनुसार नेपालले दोस्रो संक्रमणको भार अझै असोज–कात्तिक सम्म नै भग्नु पर्छ।
उनका अनुसार सरकारले अझै पिसिआरको परीक्षणलाई जोड दिएको छैन। ‘गाउँ–गाउँमा मानिसहरू कोरोनाको लक्षण लिएर बसेका छन्। त्यहाँसम्म परीक्षण हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अस्पतालको आएको संख्या मात्रै गर्नेर संक्रमण घटेको कसरी भन्न मिल्छ? ।’
उनका अनुसार अहिले कोरोनाको नयाँ (भेरियन्ट) एकदमै संक्रामक भएकाले त्यसबाट जोगिनु नै पहिलो उपाय हो।
‘अहिलेको नयाँ ‘भेरियन्ट’ ले एक जनाले ७० जनासम्म संक्रमण फैलाउन सक्छ। त्यसकारण संक्रमण न्युनीकरण गर्नमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ,’ उनी थप्छन्।